Hawgal lagu xasilinayo nabadgelyada Gaalkacyo oo la filayo inuu maanta bilawdo – Kalfadhi
Hawgal lagu xasilinayo nabadgelyada Gaalkacyo oo la filayo inuu maanta bilawdo
Maanta waxaa la filayaa in magaalada Gaalkacyo uu ka bilawdo hawlgal lagu xasilinayo nabadgelyada magaaladaas. Ciidamo isugu daraawiish iyo boolis ayaa shalay magaalada tegay.
Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan booliska ayaa noo sheegay in ay maanta dhacayaan wada-tashiyada iyo bilawga hawgalka oo lagu beegsanayo liis ay ku qoran yihiin dad ku eedaysan in ay si weyn ugu lug leeyihiin nabadgelyo-darada magaaladaas.
Taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland Gen. Cabdishukri Cabdulahi Xuseen ayaa hoggaaminaya hawgalka. Wuxuu shir jaraa’id oo aad u koobnaa oo uu ku qabtay Galkacyo digniin ugu diray ehelada dadka lagu qabto hawlgalka.
Wuxuu booliska ku amray in la xiro cid walba oo isku dayda in ay waan-waan ka gasho baaritaannada dadka loo qabto falalka amni daro ee isugu jira dilalka, kufsiga iyo boobka.
Bishii Febraayo waxaa magaalada iyo tuulooyinka ku dhow ka dhacay Afar dil iyo shan kiis oo kufsi ah. Waxaana xaaladda magaaladu faraha ka baxday toddobaadkan markii la kufsday deedna la dilay Caasho Ilyaas oo 12 jir ahayd.
Taariikh kooban oo ku saabsan Xildhibaan Maxamed Mire oo maanta lagu aasay degmada Waaciye
Xildhibaanno aad uga naxay weerarka Maka al-Mukaramah oo ugu baaqay shacabka iney isgargaaraan